स्याऊ खेती गर्ने तरिका | कृषि टुडे
स्याऊ खेती गर्ने तरिका
अभिषेक शर्मा बिहिबार, भदौ १८, २०७७
दक्षिण पश्चिम एशियामा उत्पति भएको स्याउलाई विश्वमा निकै नै स्वादिलो र स्वस्थकर फलको रुपमा मानिन्छ । हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन, खनिज र अन्य औषधिमय तत्वहरु यस फलमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरु जस्तै मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, सोलुखुम्बु, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बैतडी, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका ठाउँमा खेती गरिदै आएको छ ।
स्याउलाई विभिन्न किसिमका परिकारहरु जस्तै जाम, जेली, जुस, रक्सी, साइडर आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
स्याउको जातलाई मुख्य गरि ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । ती हुन् :
१. धेरै चिसो सहन सक्ने जातहरु: गोल्डेन डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, रिच-ए-रेड डेलिसियस, जोनाथान, मकिन्टोस, रोम ब्यूटी, ग्रीनस्मित आदि ।
२. मध्यम चिसो सहन सक्ने जातहरु: कृस्पिन, काट्जा, रेडजुन, कक्सओरेन्ज, पिप्पिन, किङअफ पिप्पिन आदि ।
३. कम चिसो सहन सक्ने जातहरु: एन्ना, ट्रोपिकल ब्यूटी, नाओमि, टाम्मा आदि ।
हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने यस फललाई शितोष्ण फलको राजा (king of temperate fruits) भनिन्छ । यसको खेतीको लागि २१.१ देखि २६.७ डिग्री सेल्सियस देखि डिग्री सम्मको तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ। जाडो समयमा स्याउलाई ७ डिग्री सेल्सियसको चिलिंग तापक्रम १२००-१५०० घन्टाको लागि आवश्यक पर्दछ। राम्रोसँग बढ्न र अत्याधिक फल लाग्नको लागि वार्षिक रुपमा १००-१२५ से.मी. वर्षा हुनुपर्दछ। सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभावसंगै फल ठूलो र राम्रो रंगको हुने हुँदा दक्षिण तिर फर्किएको जमिन यसको लागि उपयुक्त मानिन्छ।
पर्याप्त जैविक मल साथै ५.५-६.५ पी.एच भएको, पानी नजम्ने दोमट माटो स्याउ खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ । समथर जमिनमा भने उचित पानी निकासको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ।
बिरुवाको प्रसार र रोप्ने तरिका
स्याउको बिरुवाहरु प्राय बडिङ र ग्राफ्टिङ विधिबाट उत्पादन गरिन्छ । सिल्ड बडिङ मे/जुन महिना देखि सेप्टेम्बर सम्ममा गर्नुपर्दछ । त्यस्तै हुइप र टङ्ग ग्राफ्टिङ् भने फेब्रुअरी देखि मार्च सम्ममा गर्नुपर्दछ, जुन समयमा बोट पुरै सुषुप्त अवस्थामा हुन्छ । मालस बकाट्टा, मालस सिकिमेनिस, पिप्पिन, गोल्डेन डेलिसियस, मालिङ्ग आदि जातहरुलाई रुटस्टकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसरी उत्पादन भएका बिरुवाहरुलाई रोप्दा, जराको रुपमा प्रयोग गरिएको जातलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यदि रुटस्टक होचो खाले हो भने बिरुवा सार्ने बेलामा २-२.५ मि. टाढा रोप्नु पर्दछ । रुटस्टक ठूलो खाले भए ३-४ मि. को दूरीमा र यदि अझै ठूलो खाले रुटस्टक हो भने ४-६मि.को दूरीमा बिरुवा रोप्नुपर्दछ । बीउबाट उत्पादन गरिएको स्याउको बिरुवालाई भने ६-८ मि.को दुरी कायम गर्नुपर्दछ ।
स्याउको बोट जमिन सतहबाट १-१.२ मि. अग्लो भएपछि काँट्छाट गर्नुपर्दछ । बोटमा पलाएका धेरै हाँगाहरु मध्य २-३ वटा मुख्य हाँगा मात्र राखी अरुलाई हटाउनुपर्दछ । अर्को वर्षको जाडोयाममा ती मुख्य हाँगाहरु ५० से.मी. को भएपछी काँटछाँट गर्नुपर्दछ। साथै तेस्रो वर्षको कटाइमा रोगी, सुकेका र चोर हाँगाहरु हटाउनुपर्दछ ।
फोटो : विभिन्न स्रोत
विरुवाको राम्रो वृद्धि र विकासको लागि मलखादको प्रयोग अत्यावश्यक छ । बिरुवा रोप्दा खाल्डोमा नै मलको प्रयोग गर्नुपर्दछ । एक वर्ष पुरानो बिरुवाको लागि १० के.जी. गोठेमल, ९० ग्राम नाइट्रोजन, ३० ग्राम फस्फोरस र ६५ ग्राम पोटासको प्रयोग गर्नुपर्दछ । २ वर्ष पुरानो बोटलाई १५ के.जी. गोठेमल, १५० ग्राम नाइट्रोजन, ६०ग्राम फस्फोरस र १३० ग्राम पोटास प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यस्तै १० वर्ष पुरानो बोटलाई ६० के.जी गोठेमल, ६३० ग्राम नाइट्रोजन, ३०० ग्राम फस्फोरस र ६५० ग्राम पोटास प्रयोग गर्नुपर्दछ । र यदि बोट १० वर्ष भन्दा बढी पुरानो छ भने ६०-१०० के.जी. गोठेमल, ७०० ग्राम नाइट्रोजन, ३५० ग्राम फस्पोरस र ७०० ग्राम पोटास आवश्यक पर्दछ ।
गोठेमल, पोटास, फस्फोरसको पूर्ण भाग र नाइट्रोजनको आधा भाग हिमपात हुनु भन्दा पहिले डिसेम्बर महिनामा र बाँकी नाइट्रोजनको आधा भाग फूल फुल्ने समयमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्याउ खेती आकाशेपानीको भरमा नै गरिदै आएको छ । बिरुवा रोपेको १-२ वर्षसम्म पानीको आवश्यकता पर्दछ तर बिरुवा सरिसके पछि भने सिंचाई आवश्यक पर्दैन । तर यदि सिंचाई सुविधा छ भने फूल फुल्ने र फल लाग्ने समयमा सिंचाई गर्दा फलको स्वाद, रङ र साइजको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ । माटोमा चिस्यान कायम राख्न सल्लाको पात वा परालको छापो हाल्नु पनि उपयुक्त हुन्छ ।
फूल फुल्ने र फल लाग्ने
स्याउको बोटमा मार्च देखि अप्रील महिमामा फूल फुल्न सुरु गर्दछ। पराग राम्रो सँग विकसित हुनको लागि २१.१-२६.७ डि.से. तापक्रम चाहिन्छ । बोटमा धेरै फल लाग्दा, फलको गुणस्तर कम हुने भएकोले बाक्लो फल हटाई एउटा झुप्पामा १-२ फल मात्र राख्नुपर्दछ । जात अनुसार फुल फुलेको ३०-४५ दिनमा बाक्लो फल हटाइ सक्नुपर्दछ । कार्बारायल (७५०-१००० पी.पी.एम.) अथवा एन.ए.ए.(१०-२० पी.पी.एम) प्रयोग गरि रासायनिक तरिकाले बाक्लो फल हटाउन सकिन्छ । साथै एन.ए.ए(१० पी.पी.एम.) फल टिप्नु भन्दा २०-२५ दिन अघि छर्दा फल झर्ने समस्या को पनि समाधान हुन्छ ।
हरियोबाट पहेलो हरियो रङमा परिणत भएपछि फललाई टिप्न योग्य बुझ्नुपर्दछ । साथै हरियो जातमा भने खाएर नै जाँच गर्न सकिन्छ । सामान्यतया स्याउलाई जुलाई देखि अगस्टमा टिप्ने गरिन्छ ।
स्याउमा लाग्ने रोगकिरा र तिनको व्यवस्थापन
सनजोस कत्लेकिरा (San-jose scale)
यो कीराको लार्भा तथा माउले बोटको पात तथा कान्डबाट रस चुस्दछन् । यसले बढ्दै गरेका फललाई पनि आक्रमण गर्दछन्।
रोगी हाँगा हटाउने, कत्ले कीरा नभएका सामान प्रयोग गर्ने ।
– नर्सरी बेडमा थाइमेट १०% ग्राम (फोरेट) लाई १ के.जी. प्रति रोपनीको दरले प्रयोग गर्ने ।
– प्रकोप बढी भए कीरानाशक विषादी जस्तै रोजर ३०% EC (डाइमिथोयेट) लाई २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाइ प्रयोग गर्ने ।
२.स्याउको लाही (Wooly apple aphid)
यसले जमिन मुनिको जरा, पात र काण्डमा आक्रमण गर्दछ।यसको प्रकोप बढी भयो भने कान्डमा गाँठा पर्ने, जरामा असर गर्ने र बोट नबढ्ने समस्या हुन्छ।
– रोग लागेका, गाँठा परेका, सुकेका हाँगा र पात हटाउने
– बिरुवा रोप्नु अघि बिरुवाको जरालाई ०.१% फेनिट्रोथायन को घोलमा उपचार गर्ने ।
३.पातबेरुवा (Leaf rollers)
यो कीराले अप्रिल देखि सेप्टेम्बर महिनामा पलाएका कलिला पात खाने गर्दछ। यसले फलमा नराम्रो दाग लगाउछ ।
-१ मि.लि. मालाथियन लाई प्रती लिटर पानीमा मिसाइ जुन महिनामा छर्कने।
यसले कमला पात खाने गर्दछ। पातको मुनिपट्टि यसको अन्डा देख्न सकिन्छ।
– यसको रोकथामको लागि रोजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्याउमा लाग्ने दाग (Apple scab)
यो रोग लागेमा नयाँ पातमा हल्का खैरा दागहरु देखा पर्दछन् र पछि पुरै पात सुकेर मर्दछ। फलमा पनि दाग देखिन्छ। धेरै पानी परेमा यो रोग छिटो फैलिने गर्दछ ।
– यो रोग नियन्त्रण को लागि पात पलाउने र फल फल्ने बेलामा, बोर्डेक्स मिक्सचर (४:४:५०) को अनुपात मा बोटभरी छर्कने ।
– डायथेन एम४५, लाई ३ पटक छर्कने ।
२.खराने रोग (Powdery mildew)
यो रोग लागेपछी पात, फल र कलिला कान्डमा खरानी लागे जस्तो देखिन्छ र अन्तमा बोटनै मर्न सक्दछ।
– काँटछाँट राम्रो सँग गर्ने, प्रकोप बढी भए सल्फर लाई ३०० ग्राम प्रती लिटर पानीमा मिसाइ ७-१४ दिनको फरकमा छर्कने ।
३.सेतो जरा कुहिने रोग (White root rot)
यो रोग लागेपछि पात पहेलिने, ढिलो बड्ने आदि सम्स्या आउँदछन् ।
– बगैचामा पानी जम्न नदिने
– बोर्डेक्स मिक्सरको प्रयोग गर्ने।
४. बोक्रामा गुलाबी देखिने रोग (Pink disease)
यो रोग लागेपछी बोक्रामा गुलाबी दाग देखा पर्दछ।ती दागहरु पछि बढेर ठूला हुन्छन।पछि पुरै बोक्रा सुकेर बोट नै मर्दछ।
– बोर्डेक्स मिक्स्चर प्रयोग गर्ने ।
५.बोक्रामा कालो देखिने रोग (Stem black disease)
यो रोग लागेमा रोगले आक्रमण गरेको ठाउँ पुरै कालो हुन्छ । काँटछाँट गरेको भागबाट ढुसी छिर्ने भएकोले नियन्त्रणको लागि बोर्डेक्स मिक्स्चरको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
Previous गुर्जोको लोकप्रियता बढ्दै
Next अलैंची बगान सुक्न थाले